Garoonka diyaaradaha ee Garoowe oo weli xiran | KEYDMEDIA ONLINE
Garoonka diyaaradaha ee Garoowe oo weli xiran
Garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir ee Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamulka Puntland ayaa xiran maalintii afaraad.
GAROOWE, Soomaaliya - Garoonka diyaaradaha ee xarunta maamulka Puntland ayaa xiran maalintii afaraad. Garoonka ayaa maalintii arbacada ee nasoo dhaaftay waxaa ku dhacday diyaaradda Air Jibouti ee laga leeyahay waddanka Jibouti, waxaana diyaaradda oo ay ubixi waayeen lugihii ay dhulka ku dhacday iyadoo aysan qasaara kasoo gaarin dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda.
Diyaaradda oo sida la xaqiijiyay ku dhacday halka ay diyaaraduhu ka duulaan kuna soo dagaan ee loo yaqaan (Run way). Garoonka ayaa leh hal waddo oo ay diyaaraduhu kusoo dagaan kana duulaan, taasoo aysan u saamaxeen in diyaarad kale ay soo dagato inta ay diyaaradda taal halkaasi laga qaadayo.
Garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe ayaa ahaa garoon mashquul badan waxa uuna ku yaal xarunta dowlad goboleedka Puntland, iyadoo inta badn duulimaadyadii garoonkaasi iman jiray loo weeciyay garoonada kale ee ku kala yaal magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo oo ay Puntland maamusho.
Maamulka Saciid Deni wax wara kama soo saarin, sidoo kale waaxda duulimaadyada ee garoonka Garoonka Gen. Maxamed Abshir kama aysan hadlin goorta dib loo furi doono garoonka, iyo haddii ay dhawdahay shaqada dib loogu furayo garoonka oo xiran maalintiisii afaraad.